06|10|22 – Alahadin’ny mission universelle hoan’i Madagasikara [Fribourg, CH] | i am a malagasy in genève
06|10|26 – Hira sy dihy Malagasy [Luzern, CH]
06|10|15 – Terre Nouvelle hoan’i Madagasikara [Lausanne, CH]
06|10|22 – Alahadin’ny mission universelle hoan’i Madagasikara [Fribourg, CH]	Par : tomavana
Oct 13 Tags:antokom-pihira, dihy, hira, jehovah, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, vako-drazana, valiha, valihan'i jehovah
Catégorie: fanohanana, fivavahana, Valihan’i Jehovah
Satria i Madagasikara tanindrazantsika no vain-dohan-draharahan’ny Missio-opm [Œuvres Pontificales Missionnaires suisse et liechtenstein] mandritra ity taona ity; ny 22 Oktobra 2006 izay Alahadin’ny mission universelle, dia hanohana izany asa fitoriana any amintsika izany ny fiangonana katolika manerana an’i Soisa.
Singanina amin’izany ny fivavahana [lamesa + hira katolika Malagasy] atao any amin’ny fiangonana St-Paul, Fribourg, amin’ny 9 ora, izay andraisan’ny antokom-pihira Valihan’i Jehovah anjara.
lohahevitra sahala >>
3 commentaires sur “06|10|22 – Alahadin’ny mission universelle hoan’i Madagasikara [Fribourg, CH]”
13 Oct 2006 at 16:17
reply	Faly aho mafatatranao !
Lien avy @ Technorati no hitako…
Mipetraka any Soisa ve ?
Misaotra betsaka nanisy any io lien io !
13 Oct 2006 at 21:16
reply	Izaho no voalohany faly sy misaotra @ tsidikao.
Ts’hita fa aty Soisa no mila ravinahitra e.
Ary tsy misy fisaorana amin’ny rohy.
18 Oct 2006 at 23:50
reply	[…] MIVANTANA WEBCAST – 06|10|22 – 09:00 (GMT+1) – Alahadin’ny mission universelle [Fribourg, CH] malagasy […]